लामो लञ्च ब्रेक लिने साथीको पोल लगाउन आग्रह ! | गृहपृष्ठ
Home र यो पनि लामो लञ्च ब्रेक लिने साथीको पोल लगाउन आग्रह !
र यो पनि 195 views
हरेक कार्यालयमा खाजा खान निश्चित समय छुट्ट्याइएको हुन्छ । आवश्यकता र स्थान हेरी कार्यालयपिच्छे खाजा खाने समय पनि फरकफरक तोक्ने गरिन्छ । केही कर्मचारीहरू आफैले खाजा खान थोरै समय छुट्ट्याएका हुन्छन् । तर, हरेक कार्यालयमा खाजा खान घण्टौं लगाउने कर्मचारीहरू पनि भेटिन्छन् । कसैलाई भने बेलाबेला खाजा वा केही खानेकुरा खानुपर्ने बाध्यता/बानी नै हुन्छ । यी त भए कर्मचारीका समस्या । कर्मचारीको यस्तो बानीले रोजगारदातालाई पनि समस्या हुन सक्छ । त्यसैले अष्ट्रेलियाको कर कार्यालयले कर्मचारीका यस्ता बानी नियन्त्रण गर्न नयाँ उपाय निकालेको छ । अष्ट्रेलियाली कर कार्यालय ‘एटीओ’ले डिसेम्बरमा नै २० हजार कर्मचारीलाई एउटा पत्र पठाएको थियो ।
सो पत्रमा लामो लञ्च ब्रेक लिने र कार्यस्थलमा समय बर्बाद गर्ने बानी भएका सहकर्मीबारे जानकारी दिन एटीओले कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेको छ । सहकर्मीको व्यवहारप्रति चनाखो रहन कर्मचारीहरूलाई पत्रमा भनिएको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमले बीबीसीलाई उद्धृत गरेर समाचार नै छापेका छन् । ‘लामो समय चियाखाजा खानमै बिताउने, नियमित रूपमा चाँडै कार्यालयबाट निस्कने, कार्यालय छिरेको पहिलो १ घण्टा नास्ता खानमै बिताउने, पत्रपत्रिका पढिरहने वा यस्तै खालका व्यवहार तपाईंले पहिले पनि देखेको हुनुपर्छ,’ मेमोमा भनिएको छ । कहिलेकाहिँ समयको हेक्का नभएर यस्तो हुन सक्छ । कसैले चाहिँ जानीजानी पनि यस्तो गर्छन् । यस्तो गर्नुको पछाडि उनीहरूसँग केही स्पष्टीकरण पनि होला । ‘अथवा तपाईंको आशङ्का सही हुन सक्छ वा उनीहरूले आफू कार्यालयमा रहँदाको समय ठीक ढङ्गले रेकर्ड नगरेको पनि हुन सक्छ,’ मेमोमा भनिएको छ । पत्रमा एटीओका कर्मचारीहरूले अनुसन्धाताहरूलाई सहकर्मीका सम्भावित गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारबारे बताउन अभिवार्य रहेको पनि उल्लेख छ । लामो समयसम्म खाजानास्तामै समय खर्च गर्न ती कर्मचारीलाई अनुमति दिइएको छ छैन भन्ने परीक्षण गर्न अनुसन्धाताहरू खटाइएका हुन् । सहकर्मीको पोल लगाउन कर्मचारीहरूलाई असहज हुन सक्ने देखेर नै तिनीहरूले दिएको रिपोर्ट गोप्य राखिने पत्रमा बताइएको एबीसी न्यूजले पनि एक समाचारमा उल्लेख गरेको छ । तर, यस्तो रणनीतिले कार्यालयको संस्कृतिमा खलल पुर्‍याउने मात्र नभएर कर्मचारीबीचको एकता पनि खल्बल्याउने भन्दै आलोचकहरूले यसको निन्दा पनि गरेका छन् ।
‘आफू काम गरिरहँदा अर्को साथी बाहिर गएको छ भन्ने भावनाले ईर्ष्यालु बन्दा वा तपार्इंलाई उनीहरूको यस्तो बानी मन परेन भन्दैमा कुरो लगाउने ?’ एबीसी न्यूजलाई अष्ट्रेलियन सर्भिसेज युनियन सेक्रेटरी जेफ ल्यापिडोसले भने । उता, युनिभर्सिटी अफ सिड्नीका कार्यस्थल विज्ञ एशोसिएट प्राध्यापक एञ्जेला नोक्सले पनि यो नीतिले प्रतिकूल वातावरण सृजना गर्ने चेतावनी दिएकी छन् । यस्तो नीतिले कर्मचारीहरू लामो समयसम्म कार्यालयमा नटिक्ने र उनीहरूको मनोबल एवम् उत्पादन क्षमता पनि घट्ने नोक्सको भनाइ छ । एटीओले भने एक विज्ञप्तिमा आफ्ना अधिकांश कर्मचारीले सो नियमको पालना गर्ने बताएको छ ।